Ole Gunnar Solskjaer Oo Soo Bandhigay Dareenkiisa Ku Aadan Kulanka Ay Ka Hor-tegi Doonaan Barcelona Iyo Waxa Loogu Sheegay Farriimo Qoraal Ah Oo Loo Soo Diray - Cadalool.com
Ole Gunnar Solskjaer Oo Soo Bandhigay Dareenkiisa Ku Aadan Kulanka Ay Ka Hor-tegi Doonaan Barcelona Iyo Waxa Loogu Sheegay Farriimo Qoraal Ah Oo Loo Soo Diray
Tababaraha ku-meelgaadhka ah ee Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka dareen celiyey isku-aadka Champions League ee wareegga sideed dhamaadka oo ay isku beegmeen Barcelona.
Manchester United ayaa tegi doonta Camp Nou lugta labaad, waxaanay halkaas ka raadin doontaa guul kale 20 sannadood kaddib markii ay kusoo qaadeen tartanka Champions League oo sannadkii 1999 ay si mucjiso ah daqiiqadihii ugu dambeeyey ugu garaaceen Bayern Munich.
United oo uu hoggaaminayo Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxay ka hor tegi doonaan Lionel Messi oo 22 gool ka dhaliyey kooxiaha Ingiriiska ah ee uu ka hor yimid.
Haddaba Ole Gunnar Solskjaer oo u warramay website-ka Manchester United ayaa wax laga weydiiyey ciyaartan, waxaanu uu yidhi: “Haa, waa inay Barcelona noqoto. Farriimo badan oo qoraal ah ayay saaxiibbaday ii soo direen, waxaanay iigu sheegeen in sannadkan ay tahay sannadkayagii sababtuna waa tirooyinkayga, 20 iyo in 20 sannadood laga jogoo (Lambarka 20 ayuu u xidhan jiray United, waxaana laga joogaa 20 sannadood guushii Camp Nou ee 1999)”
“Mar kale ayaanu ka degaynaa Nou Camp.” Ayuu yidhi.
Tababaraha reer Norway waxa uu intaas kaddib dib u milicsaday habeenkii mucjisada ee ay ku garaaceen Bayern Munich, waxaanu yidhi: “Waxay ahayd habeenkii ugu weynaa ee kubadda cagta igu soo maray. Dabcan, dhamaantayo kooxdana wuu noo ahaa, waxa uu ahaa habeen aan la rumaysan karayn.
“Waa garoon wanaagsan… iyo dabcan inaanu ku kulanay wareeggii koowaad ee groupyada oo 3-3 aanu labadii kulan ku kala baxnay, haddana waxay noqon doontaa ciyaar wanaagsan.”
Ole Gunnar Solskjaer waxa kale oo uu dib u fiiriyey saddexdii jeer ee sannadihii 2009, 2011 iyo 2008 ee ay iskaga hor yimaaddeen Barcelona, waxaana uu yidhi: “Waxaanu doonaynaa inaanu ka hor tagno kooxaha ugu waaweyn ee haysta ciyaartoyga ugu wanaagsan. Waxaanu la ciyaarnay finalkii 2009 iyo 2011 iyo semi-finalkii 2008 oo Paul Scholes uu noo dhaliyey, waana kulamada noocaas ah kuwa ay taageereyaashayadu doonayaan. Waananu u kabo-gashan doonaa ciyaartan.”
Kulanka koowaad ee Manchester United iyo Barcelona ayaa ka dhici doona Old Trafford marka ay taariikhdu tahay April 10, lugta labaadna toddobaadka xiga ayay Camp Nou albaabada iskugu xidhan doonaan.